Diego Maradona Oo Taageeray Isticmaalka Garsooraha Macmalka Ah ‘video referees’
HomeWararka MaantaDiego Maradona Oo Taageeray Isticmaalka Garsooraha Macmalka Ah ‘video referees’
Mucjisada kubadda cagta caalamka, Diego Maradona ayaa is-barbar taagay oo taageeray isticmaalka garsoorka macmalka ah ‘video assistant referees (VARs)’ wallow uu ahaa, shaqsigii dhaliyey Goolkii caan baxay ee ‘Gacanta uu goolwadaha kaga dulqaaday” kuna sifeeyey inaanu gool noqdeen haddii uu jiri lahaa hanaankan siidhi-wadaha Tiknoolajiyada ahi koob aduunkii 1986 -kii.
Maradona ayaa gacantiisa u isticmaalay si khiyaano ah, sii uu u dhaliyo goolkii Argentina kaga badisay xulka Ingiriiska, kulankii quarter Finalka Koobka aduunka 31 sanadood ka hor.
“Dhab ahaan, waxay ila tahay inaanay dhacdeen, mar kasta oo aan daawadana waxaan aad u sii taageeraa qorshaha isticmaalka garsooraha macmalka ah,”ayuu Maradona ku yidhi, waraysi uu siiyey, shabakada Fifa.com.
“Sidaasaan u malaynayaa, mana hubo, goolkaasi ma noqdeen mid ansaxa.”
Maradona wuxuu qirtay, inuu ka faa’iidaystay fursadii jiritaan la’aanta garsooraha macamlka ah, iyo Tiknoolajiga cusub, ciyaarihii koobka aduunka, waliba aan mar qudha ahayn, ee uu laba jeer ku faa’iiday.
“Arin kale ayaan kuu sheegayaa – tartankii koobka aduunka 1990 kii, gacantayda ayaan isticmaalay si aan kubadda u dhaafiyo liidka ama xariiqda goolka [heerkii Groups ka] kulankii aanu la ciyaaraynay xulkii Midowga Sofiyeeti ‘Soviet Union,” ayuu yidhi.
“Nasiib ayaan lahayn, sababtoo ah, siidhi-wadihii ciyaartu ma arkaynin falkaas. Dee imikana Tiknoolojiyada dib uguma soo saari kartid, Maantase aad bay uga duwan tahay xaaladu.”
56 jirkan, loo aqoonsan yahay inuu ahaa mucjisadii kubadda cagta abid soo marta, wuxuu intaas ku daray, in goolkii muranku ku jiray ee uu Geoff Hurst ka dhaliyey xulka England koob aduunkii 1966 kii, sidoo kale aanu gool ahaadeen, haddii barnaamijkan, garsoorka macmalka ah ee ‘VARs’ uu jiri lahaa xiligaas.
“England waxay koobka aduunka 66 kii ku qaadeen, gool aanay kubaddu liidka ama xariiqda ka gudbin,” ayuu yidhi.
“Dhacdooyin badan baa ka soo bixi lahaa laguna arki lahaa taariikhda koobka aduunka, waxaanu noqon lahaa mid ka duwan haddii Tiknoolajiyadan oo kale la isticmaali lahaa berigaas. Marka imika waa xiligii wax badan laga bedeli lahaa guud ahaan.”
Tawaawaca Labadii Ciyaaryahan Ee Rigoodhayaasha Laga Qabtay Xulka Holland
Daawo Muuqaalada Xiisaha Lahaa Ee Ciyaarta Argentina Vs Holland
Saxaafada Argentine Oo Dhaleecayn Ku Bilawday Messi